Madaxweynaha DDS, Mustafa Cumar oo Warbixin Xasaasi ah Bixiyay. – Bandhiga
Madaxweynaha DDS, Mustafa Cumar oo Warbixin Xasaasi ah Bixiyay.
Madaxweynaha DDS, Mustafa Cumar, ayaa sheegay in laga adkaaday shabakad isku xidhan oo ka kooban hadhaagii dawladii hore iyo wax uu ku tilmaamay kuwii ka faa”idaysan jiray dhiiga shacabka Soomaaliyeed ee ku heli jiray qandaraasyada iyo lacagta.
Madaxweynaha, oo maanta ku soo laabtay caasimada, ayaa shacabka ugu bishaarayay in laga guuleystay koox caado ka dhigatay in lagu meeraysto xafiisyada federaalka iyo ciidamada si ay war uga dhigaan waxa ay dadweynaha gobolku dareensanyhiin ee ah Soomalinimada, dulmiga oo la diido iyo diinta( Islaamnimada).
Mustafa Cumar ayaa sheegay in bilihii la soo dhaafay ay jireen caqabado la xidhiidha sidii isbadalka gobolka loo dadar galin lahaa, gaar ahaan in lagu kala duwana aragtida xisbiga dib loogu dhisayo. Waxa uu madaxweynahu tibaaxay in arrintaasi warbaahinta gashay oo siyaabo kala duwan looga hadlay balse hadda laga heeshiiyay.
Waxaa xusid mudan in xiisad siyasadeed gobolka ka aloosnayd labadii toddobaad ee laga soo gudbay iyada oo warbaahinta Geeska Afrika danaysa diirada saartay khilaaf la sheegay inuu soo kala dhaxgalay madaxweynaha DDS iyo madax xisbiga kaaso salka ku hayay dhisida xisbiga iyo sida laga yeelayo xubno xisbiga ku jira oo lagu tuhmayo danbiyo.
Madaxweynahu carrabka kuma dhufan cidda ku naaxday dhiiga shacabka laakiin waxaa jira tuhun ay dadweynahu gobolku ka qabaan xubno ku jira EPRDF iyo sirdoonka dalka oo faraha la soo galay maamulka. Isla xubnahaas ayaa lagu tuhmaya inay saamayn siyadeed ku lahayeen xukuumadii hore islamarkaana dano dhaqaale ku qabeen.
Mustafa Cumar ayaa xusay inla soo bandhigi doono qorshe ku aadan dhismaha xisbiga, adkaynta amaanka iyo xoojinta hourumarka si loo taam yeelo isbadalka. Madaxweynaha, oo ay kalsooni ka muuqato, ayaa shacabka deegaanka ku amaanay midnimadii laga dhaxlay is xag-xagashadii madaxda sare.
Dhanka kale, dadweynaha caasimada Jigjiga ayaa sii diiran u soo dhoweeyay wafdiga madaxweynaha iyada oo aad moodaysay inloo sameeyay soo dhowen la mid ah tii loo muujiyay markii xilka loo magacabay.
Madaxweynaha, oo hadalkiisa ka jeediyay xaruunta madaxtooyada, ayaa waxaa dhincayada ka taagnaa Adan Faarax oo ah ku-xigeenkiisa iyo Fardowsa Maxamad oo ah ku-xigeenka Afhayeenka baarlamanka.
Xalay shirkoole maxaa ka dhacay
Masar iyo Jabouti oo ka wada hadlay xasiloonida geeska Africa
Waa kuma safiirka cusub ee Mareykanka ee Soomaaliya?